​सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर परकम्प
काठमाडौं, ३ असोज । सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार राति भूकम्प गएको छ । राति १० बजेर ५७ मिनेटमा सिन्धुपाल्चोकको गुम्बा गाविसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । दुई साताअघि दोलखा केन्दुबिन्दु भएर ४ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको थियो । विस्तृत समाचार
राजनीतिक विवादले एक तहमै खुम्चियो काठमाडौं
‘‘समग्रमा जिल्लालाई एक स्थानीय तह बनाउने गरी आयोगमा प्रस्ताव आएको छ । पछि काठमाडौँलाई मेट्रोसिटी बनाउने गरी प्रस्ताव समितिले गरेको हो । हामीले एक स्थानीय तहबारे छलफल गर्छौं तर एक वटा बनाउन हाम्रो मापदण्डले दिँदैन ।” काठमाडौं, ३१ भदौ । काठमाडौं जिल्लालाई एक स्थानीय तह मात्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले काठमाडौं जिल्लालाई एक स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्ने गरी ‘गाउँपालिका,… विस्तृत समाचार
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका इन्जिनियरको घुर्की
काठमाडौं, ३० भदौ । भूकम्पपश्चात् सहरी विकास मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएका इन्जिनियरले उचित सेवासुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । १४ जिल्लामा खटिएका करिब २ हजार ६०० प्राविधिक (इन्जिनियर आर्किटेक्ट, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर)ले कार्यक्षेत्रमा रही काम गर्नका लागि कार्यालय नभएको हुनाले तत्काल प्राविधिक कार्यालयको व्यवस्था नभए कार्यक्षेत्रमा नजाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले बुधबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक पदम मैनाली, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव… विस्तृत समाचार
धुमधामसँग मनाइँदै इन्द्रजात्रा
इन्द्रध्वजासहितको लिंगो ठड्याउँदै गरेको फाइल तस्बिर काठमाडौं, ३० भदौ । वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा–आराधना गरी आज परम्परागत इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायत स्थानमा मनाइन्छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिंगो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवदेवताको पूजाआजा गरी… विस्तृत समाचार
इन्द्रजात्राको रथ बनाउनेको तलब एक रुपैयाँ ?
काठमाडौं, ३० भदौ । इन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ तर जात्रामा श्रीकुमारी, श्रीगणेश र श्रीभैरवको रथ बनाउने परम्पराका नकर्मीले बुधबार एक रुपियाँ तलब बुझेका छन् । उनीहरूका लागि तलब पाउने व्यवस्था गरिए पनि जिजुबाजेका पालादेखि नबढाइएकाले अहिले सुन्दा अनौठो र हाँसो उठ्ने अवस्था छ । काठमाडौं ज्यावहाल वडा नं. २१ का चार नकर्मीले जनही एक पैसा तलब बुझ्दै आएकोमा एक… विस्तृत समाचार
​पर्यटकीय यामसागै व्यवसायी उत्साहित
भरतपुर, २८ भदौ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित बनेको यहााको पर्यटन व्यवसाय पर्यटकीय मौसम सुरू भएसागै गरिएका अग्रिम बुकिङका कारण व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । गत वर्ष वैशाखमा आएका भूकम्प र त्यसपछि तराईमा गरिएको आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीका कारण पर्यटक आगमनमा निकै कमी आएको थियो । स्वदेशी पर्यटकले मात्र व्यवसायी चित्त बुझाउन बाध्य भएका थिए । सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर तथा फेब्रुअरी, मार्च र… विस्तृत समाचार
​भारतीय एसएसबीद्वारा नेपालीमाथि कुटपिट
गौशाला, २८ भदौ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) द्वारा महोत्तरीको मटिहानी गाविसमा दुई जना नेपाली निर्घात कुटिएका छन् । सोमबार दिउँसो करिब ३ बजेको समयमा भारत विहारको मधुबनी जिल्लाअन्तर्गत पर्ने मधवापुरमा सीमा सुरक्षाका लागि खटिरहेका एसएसबीका जवानले नेपालतर्फ मटिहानी–७ मा प्रवेश गरी स्थानीयवासी गणेश चौधरी र महेश महतोलाई निर्घात कुटपिट गरेका हुन् । एसएसबीले उनीहरुलाई लट्ठी र बुटले कुटेपछि उनीहरु गम्भीर घाइते भएका छन्… विस्तृत समाचार
​बस र ट्रक ठोकिँदा एकको मृत्यु, २० घाइते (अपडेट)
चितवन, २५ भदौ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत राप्ती नगरपालिका–३ पिप्लेमा शनिबार बिहान ७ः१५ बजे बससँग ठोकिँदा ट्रक चालकको मृत्यु भएको । २० जना घाइते भएका छन् । ट्रकका चालक बारा, गण्डकका ३० वर्षीय हेमन्त खड्काको ट्रकमा च्यापिएको अवस्थामा उद्धार गरेर भरतपुर अस्पताल ल्याइएकामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । घाइतेमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर छ । दुर्घटनामा दुवै ट्रक र बसमा सवार चालक, सहचालक र यात्रु… विस्तृत समाचार
उपमहानगरपालिकाका हाकिमलाई नै मुक्का
काठमाडौं, २५ भदौ । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालामाथि कार्यकक्षमै हातपात भएको छ । उनलाई आफ्नै कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृत रामदयाल यादवले हातपात गरेका हुन् । कार्यालयले करारमा राखेका कर्मचारीको करारको म्याद तय र तलबको विषयले चर्को रुप लिएपछि प्रशासकीय प्रमुख यादवले नै कार्यकारी प्रमुखमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए । सुरुमा प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा नै करारका चालक र… विस्तृत समाचार